किन हुन्छ बारम्बार गर्भपात ? | Ratopati
बारम्बार ‘गर्भपात’ हुने महिलामा फेरि गर्भ रहने सम्भावना हुँदैन ? (भिडियो)
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २, २०७८ chat_bubble_outline0
गर्भपात (मिसक्यारेज) आम समस्याको रुपमा देखिएको छ । सामान्यतया अस्वस्थकर जीवनशैली, ढिला विवाह, तनावपूर्ण दैनिकीजस्ता अनेकन् कारणले गर्भपातको समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
हामीले वास्तवमै गर्भपात किन हुन्छ ? गर्भपात हुन लाग्यो भनेर कसरी थाहा पाउने ? र यसको निराकरण गरी सुरक्षित गर्भाधानका उपायबारे वात्सल्य इनफर्टिलिटी तथा आईभीएफ सेन्टरकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. निजा राजभण्डारीसँग बुझ्ने कोशिस गरेका छौं । प्रस्तुत छ, डा. राजभण्डारीकै भनाइको सम्पादित अंश–
कतिपय महिलामा हर्मोनको समस्याले पनि गर्भपात भइरहेको पाइन्छ । कतिमा इन्डोक्राइन सम्बन्धी समस्या, पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पीसीओएस)को समस्याले पनि गर्भपात गराएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा उपचार गरी हर्मोनको मात्रा सन्तुलनमा ल्याएर पुनः गर्भधारण गर्न सकिन्छ ।
सामान्यतया गर्भावस्थाको पहिलो अवस्था (पहिलो १२ हप्ता)को समयमा पेट दुख्ने, यौनाङ्गबाट तरल पदार्थ बग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । कतिमा सुरुकै अवस्थामा अर्थात् १२ हप्तासम्मको अवधिमा कहिलेकाहीँ इनप्लान्टेसन ब्लिडिङ (हल्का रगत देखिने) पनि हुनसक्छ तर त्यो सामान्य हो र एक दुई दिनमा सामान्य हुन्छ । तर, धेरै पेट दुख्ने, चोक्टा चोक्टा भएर रगत जानेजस्ता लक्षण देखियो भने त्यो मिसक्यारेजको लक्षण भनेर बुझ्नु पर्छ र डाक्टरको परामर्शमा जानुपर्छ ।
बारम्बार मिसक्यारेज हुने महिलामा फेरि गर्भ रहने सम्भावना कति हुन्छ ?